Ceramic hasha Grain
Green nesilicon Carbide
Glassfibre Ichitsigirwa ndiro
Spindles nokuti anopapama Wheels
Vitrified vachikuya Wheels
Pamusoro vachikuya uye Cylindrical kukuya
Bevel Gear vachikuya
Gear Form vachikuya
Resin-waakaita vachikuya Wheels & Cheka-kure Wheels
Bhaudhi-twasu vachikuya mavhiri
Hypodermic tsono vachikuya
Mwoyo Center vachikuya Wheels
Yanyatsosimba Chekai-kure Wheels
Large Cut-kure Wheels
Zvakarurama nokuveza mavhiri
Hasha Sponge Block
siyana chigadzirwa kukosha anogadzirwa dzakasiyana kugadzirwa nguva. kazhinji, nokuti vakawanda kugadzira, kutungamirira nguva mazuva 20-45 mushure mekugamuchira Oder. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha. Pallets munogara kushandiswa akawanda chigadzirwa yedu. Mazvikokota kavha uye non-mureza chiputiriso zvinodiwa vanogona kutongerwa chimwezve mutariri.
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana nokukurumidza.